“Nne ebezila ị̀ nụ? . . . Chukwu ma nke ka mma.”
Ihe a ka mmadụ takwunyeere otu nwaanyị aha ya bụ Bebe. Onye ahụ gwara ya ihe a mgbe a na-eli papa ya nwụrụ n’ihe mberede okporo ụzọ.
Bebe na papa ya dị n’ezigbo mma. Onye gwara Bebe ihe ahụ iji kasie ya obi bụ otu nwaanyị ya na ezinụlọ Bebe hà dị ná mma. Ma, ihe ahụ ọ gwara Bebe gbawara ya obi. Ihe Bebe nọ na-ajụ onwe ya bụ, “ọnwụ papa m ọ̀ bụnụ ihe ọma?” Mgbe ọtụtụ afọ gachara, Bebe dere ihe a merenụ n’akwụkwọ. Ihe o dere gosiri na ọ ka na-eru uju ọnwụ papa ya.
Otu ihe Bebe bịara chọpụta bụ na ọ naghị adị mfe mmadụ ịkwụsị iru uju ọnwụ onye nwụnahụrụ ya, karịchaa, ma ọ bụrụ na ya na onye ahụ dị n’ezigbo mma. Baịbụl kpọrọ ọnwụ “onye iro ikpeazụ.” (1 Ndị Kọrịnt 15:26) Onye anyị hụrụ n’anya nwụọ, ọ na-akpaghasị ndụ anyị, karịchaa, ma ọ bụrụ na onye ahụ nwụrụ na mberede. O nweghị onye n’ime anyị ọnwụ na-anaghị akpa aka ọjọọ. Ọ bụ ya mere o ji esiri anyị ike mgbe ụfọdụ ịma ihe anyị ga-eme ma mmadụ nwụnahụ anyị.
I nwere ike ịna-eche, sị: ‘Ọ̀ ga-ewe mmadụ afọ ole tupu ya akwụsị iru uju onye nwụnahụrụ ya? Olee ihe ga-enyere mmadụ aka idi ọnwụ onye nwụnahụrụ ya? Olee otú m ga-esi kasie ndị mmadụ nwụnahụrụ obi? Ndị nwụnahụrụ anyị, hà ga-adị ndụ ọzọ?’
Gịnị ka ị ga-eme ma ọ bụrụ na ndị ọzọ chere na ị na-erubiga uju ókè?